माधव पक्षका नेताहरु भन्छन्, ‘ओलीबाट एकता भंग गर्ने घोषणा भइसक्यो, हस्ताक्षर फिर्ता लिन्नौँ’ - DURBAR TIMES
HomeNewsमाधव पक्षका नेताहरु भन्छन्, ‘ओलीबाट एकता भंग गर्ने घोषणा भइसक्यो, हस्ताक्षर फिर्ता...
माधव पक्षका नेताहरु भन्छन्, ‘ओलीबाट एकता भंग गर्ने घोषणा भइसक्यो, हस्ताक्षर फिर्ता लिन्नौँ’
काठमाडौँ- पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनौपचारिक वार्तामा रहेका केही नेता बाहेक नेकपा एमाले विद्रोही पक्षका सबै नेताहरुले ओलीको एकता प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भएका छन् ।
आइतबार राति सार्वजनिक एकता प्रस्तावबाट ओलीले पार्टी एकता भंग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै ओलीले गरेका कुनै पनि प्रस्ताव मान्य नहुने निष्कर्ष यो पक्षका नेताहरुले निकालेका हुन् ।
त्यसलाई औपचारिक रुप दिन सोमबार बिहान ११ बजे यो पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरु भर्चुअल रुपमा भेला हुँदै छन् ।
स्थायी कमिटि सदस्य बेदुराम भुसालले अध्यक्ष ओलीले अन्ततः पार्टी एकता नगर्ने घोषणा गरेको निष्कर्ष निकालेको बताए ।
उनका अनुसार ओलीले आफ्नो ६ बुँदे एकता प्रस्ताव ‘नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने र नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी संरचना गतिशिल हुनेछन्’ भनेका छन्। ओलीले यस्तो प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै जेठ २ अघिको अवस्थामा पुगेको मानिन्न ।
विद्रोही पक्षले पार्टी पूर्व एमालेमा फर्किनुपर्ने अडान लिएको छ । भुसालले भने,‘ ओलीले एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा म फर्काउँदिन भनेर सजिलै घोषणा गर्नु भएको छ । यसबाट पार्टी एकता सम्भव छैन ।’
ओलीले ‘मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभुतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशिल हुनेछन् भन्नु’ पनि उनी पार्टी एकता चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट भएको विद्रोही पक्षको निष्कर्ष छ ।
भुसालले भने,‘ मुलभुत रुपमा भन्ने बित्तिकै ओलीले चाहेका कमिटीमा नेताहरु राखिनै रहनुहुने छ। नचाहेका ठाउँमा राख्नुहुने छैन। एकता हुनका लागि मुलभुतको ठाउँमा सम्पूर्ण रुपमा भन्ने हुनुपर्छ। जुन उहाँले गर्न चाहनु भएन ।’
यस्तै ओलीले ‘आफ्ना पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ’ भनेका छन् ।
यसमा नेता भुसालले भने,‘ हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन्नौँ। राष्ट्र र लोकतन्त्रलाई बचाउन गरेको हस्ताक्षर हो त्यो। दोस्रो पटक पनि संसद भंग गर्नु गलत भएकाले उहाँले नै माफी माग्नुपर्छ ।’
अर्कोतिर संसद भंग गरेर अहिले मुलुकलाई चुनावमा धकल्नुपर्ने आवश्यता नै नभएको भुसालको ठहर छ। उनले भने,‘महामारीमा उपचार नपाएर जनताले ज्यान गुमाएका र राहत प्याकेज सरकारबाट नपाएका बेला राज्यले ५० अर्बको चुनावको घोषणा गर्नु व्यवहारिक हो त? ५० अर्बले एकसेएक’ अस्पताल बन्छन् ।’
आफूहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न लगाएर मुलुकलाई तथाकथित चुनावमा लैजाने ओलीको उद्देश्य भएको उनले बताए ।
ओलीले ‘यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमिकमजोरीलाई लिएर कुनै पनि कारवाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन’ भनेका छन् ।
भुसालको प्रश्न छ,‘ कारवाही गरेकाका हकमा के हुन्छ त? यो बीचमा उहाँले धेरैलाई कारवाही गर्नु भएको छ। झलनाथ खनाल र माधव नेपाल जो ओलीका पनि नेता हुन् उनीहरुलाई पनि कारवाही गर्नु भएको छ। यसरी एकता हुन्न ।’
ओलीले भनेका कुनै पनि सिद्धान्त र पद्दति आफैले पालना नगरेको आरोप भुसालले लगाए ।
ओलीको यो प्रस्तावले विद्रोही पक्षमा देखिएको अलमल साेमेबार नै स्पष्ट हुने भएको छ ।
यो पक्षका अधिकांश नेताहरुले ओलीसँग एकता सम्भव नभएकाले पार्टी पुनर्गठनका लागि अघि सरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, पछिल्लो पटक सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमा ।
तर खासगरी ओलीपक्षसँग पछिल्लो समय अनौपचारिक वार्तामा रहेका नेताहरुले पार्टी पुनर्गठनमा हतार गर्न नहुने पार्टी एकताको प्रयास अन्तिमसम्म गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि यो पक्षले पार्टी एकताका लागि वार्ताको ढोका खुल्लै राख्ने तर आफूहरुमाथि भएको कारवाही फिर्ता नभएसम्म अनौपचारिक वार्ता प्रक्रिया अघि नबढाउने र आन्तरिक रुपमा पार्टी पुर्नगठनको अभियानलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
चालबाजीपूर्ण तरिकाले ओलीले वार्तालाई अगाडि बढाएको र त्यसको भ्रममा पर्न नहुने यो पक्षका अधिकांश नेताहरुको भनाइ छ ।
आइतबार ओलीले सार्वजनिक गरेको एकता प्रस्तावमा कुनै पनि नौलो कुरा नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फागनु २३ मा नेकपा एमाले ब्यूँताएपछि ओलीले फागुन २८ गते नेपाल पक्षको अनुपस्थितिमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएका थिए ।
उक्त बैठकबाटै उनले नेपाल पक्षका सबै पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी मुक्त गराएका थिए । त्यसपछि ओलीले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका केही नेतालाई समेटेर स्थायी कमिटी पनि पुनर्गठन गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीलाई उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा बदलेका छन् ।
यो पक्षका अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने,‘ ओलीले षड्यन्त्रपूर्वक यो प्रस्ताव अघि सारेका छन्। हामीले न उनले प्रस्ताव गरेको कमिटी स्वीकार गछौँ न सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएकाे हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौँ। यसमा हामी दोधारमा छैनौँ ।’
उनका अनुसार बरु आफ्नै पक्षका तर अलमलमा रहेका केही नेताहरुले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्ने मौका मिलेको छ ।
Previous articleमाधव नेपाललाई शंकर पोखरेलको सुझाव– अब मन मिलाउने र पार्टी बनाउने कुरा गरौं
Next articleप्रदेश–१ को बजेट अधिवेशन आज हुने